नेपालीले धानेको अष्ट्रेलियाको श्रम बजार – ।।दाङ खबर।।
Home / प्रवास / नेपालीले धानेको अष्ट्रेलियाको श्रम बजार
नेपालीले धानेको अष्ट्रेलियाको श्रम बजार
२०७४, १ मंसिर शुक्रबार ११:४२	प्रवास
सिड्नी । अष्ट्रेलियाको अर्थतन्त्र अप्रवासीहरुकै कारण आजको अवस्थामा आइपुगेको तथ्य सबैसामु छर्लङ्ग छ । त्यसमाथी पनि पछिल्लो १० वर्षमा ह्वात्तै बढेको नेपाली समुदायका कारण अष्ट्रेलियाको अर्थतन्त्रमात्र नभई श्रम बजार पनि धानेको नयाँ तथ्य बाहिर आएको छ ।
सन् २ हजार १६ को जनगणनाको परिणम अनुसार अष्ट्रेलियामा रोजगारी पाउनेमा सबैभन्दा बढी नेपाली समुदाय रहेका छन् । तथ्यांक अनुसार हरेक १० नेपालीमध्ये करिब ८ जना कुनै न कुनै रोजगारीमा संलग्न भएको पाइएको छ । रोजगारीमा नेपालीहरुले यहींका स्थानीयलाई समेत पछाडी पारेका छन् । तथ्यांक अनुसार अष्ट्रेलियाको कुल जनसंख्याको ६२ प्रतिशतले मात्र यहाँ रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । त्यस्तै कुल विदेशी जनसंख्याको ५६ प्रतिशतले जागिर खाएका छन् । त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै रोजगारी प्राप्त गर्नेमा नेपाली नागरिक रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको हो । अष्ट्रेलियाको तथ्यांक विभागले जारी गरेको प्रतिवेदनमा हरेक ५ मध्ये ४ नेपाली कुनै न कुनै प्रकारको काममा संलग्न भएको देखाएको छ । त्यस्तै नेपाललाई पछ्याउँदै ७६ दशमलब २ प्रतिशतले जिम्बाबियनले रोजगारी पाएका छन् । त्यसैगरी ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका र क्यानडा क्रमश तेस्रो, चौंथो र पाँचौ स्थानमा रहेका छन् ।
किन काम पाउँछन् नेपालीले ?
अष्ट्रेलियामा रहेका १ लाख भन्दा बढी नेपाली जनसंख्या यहाँ सुनौलो भविश्यको खोजी गर्दै आएको हो । उच्च शिक्षाका साथै पार्टटाइम काम गरेर मनग्य आम्दानी पनि गर्न सकिने भएकाले अधिकांश युवाहरुको पहिलो रोजाइमा पर्न थालेको छ अष्ट्रेलिया । हो यही कारण नै अष्ट्रेलियन श्रम बजारमा नेपालीहरुले ठूलो हिस्सा ओगटेका हुन् । नेपालीहरु यहाँ आएर पढाई पुरा मात्र गर्दैनन्, साथै समय व्यवस्थापन गर्दै काम पनि गर्दै अर्थोपार्जन पनि गरिरहेका हुन्छन् । त्यसो त नेपालीहरु बढी लगनशील र मेहनती पनि हुने भएकाले पनि अष्ट्रेलियन श्रम बजारमा नेपालीहरुलाई रुचाइन्छ ।
समरहिलका ३९ वर्षिय ज्याक नेपालीहरुको मेहनत र मिजासिलो व्यवहारबाट प्रभावित भएको सुनाउँछन् । केही समय पहिलेसम्म रेष्टुराँ व्यवसायमा संलग्न उनले नेपालीहरुको सोही गुणकै कारण आफुले पनि नेपाली कामदारलाई प्राथमिकता दिने गरेको बताए । उनले भने, ‘मैले रेष्टुराँ चलाउँदा नेपाली कामदारलाई नै प्राथमिकतामा राख्ने गरेको थिएँ । उनीहरुको इमान्दार, मेहनती र लगनशील व्यवहारबाट म निकै प्रभावित छु । मलाई यहि कुराले नेपालप्रति आकर्शण बढेको छ । त्यसैले छिट्टै नेपाल घुम्न जाने सोंचमा पनि छु ।’
२०७४, १ मंसिर शुक्रबार ११:४२
Previous को हुन समीरमानसिंह बस्नेत ? गौचन हत्याका अनुत्तरित प्रश्न
Next विवाह गर्ने सुरमा हुनुहन्छ ? थाहा पाउनुहोस् कुन महिनामा जन्मिएका युवती कस्ता हुन्छन्
विदेशी कामदारको मलेसियामा लेभि तिर्न नपर्ने
२०७४, ६ पुष बिहीबार १४:११